Haweenay 30 sano addoonsi ku jirtay oo hadda u tartameyso baarlamaanka Mauritania… – Hagaag.com
Haweenay 30 sano addoonsi ku jirtay oo hadda u tartameyso baarlamaanka Mauritania…
Posted on 2 Agoosto 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Habi bintu Rabah oo ka sheekeysay sheekadeeda adoonsiga oo socotay muddo sodon sano, waxay sheegtay in ay markaasi jirtay afar sanno markii la qaatay hooyadeed deegaanka Muderdra, waxay halkaasi ku sugneyd ilaa ay ka hesho xurriyadeeda.
Habi ayaa gashay siyaasadda waxay isu sharaxday in ay u tartanto baarlamaanka waxayna ka ordeysaa magaaladeeda bisha September ee soo socota, waxay uga warantay BBC tijaabadeedii xanuunka badneyd.
Habi ayaa go’aansatay in ay ku sheegto cod dheer mixnadeeda taasi oo ay ku jiraan kumanaan Mauritania u dhashay oo weli ku hoos jira ibtilada addoonimo.
Ka dib markii la xoreeyay sanadkii 2008 ayey ku biirtay dhaqdhaqaaqa “Aera” xuquuqda aadanaha iyo la dagaalanka addoonsiga ee Mauritania, iyadoo lagu tiriyo in ay laheyd badbaadinta “cududdii iyo axmaqnimo,” Milkiilaha sidii ay ku cabirtay ra’yigeeda.
Waxay sheegtay in ay ka bartay waayo-aragnimadeeda in ay ahaato mid “xoog leh oo rabitaan bir ah leh” si ay u dalbato sinaanta muwaadiniinta dhexdooda iyo dagaalka ka dhanka ah addoonsiga wadankeeda si loo “dhiso bulsho xor.”
Ma jirin doorasho kale oo hor taalay Habi oo aan ka aheyn in ay ka hortagto sayidkooda iyo saraakiishii dhulgoosiga ahaa ee adoonsan jiray welina ay adoonsadaan iyo ka faa’ideysiga masaakiinta oo weli ku xadgudba sharcigii soo baxay sanadkii 2007, kaasi oo dembi ka dhigaya addoonsiga.
Waxay tiri: “waxaan garaacayaa albaabada,waxaan la hadlaya koox dad ah maalin kasta, si aan ugu sharxo in aan addoonsi ku qaatay 30 sanadood, mana ka quusan doono oo ma is dhiibi doono, laakin waxaan ka hor iman doonaa kuwa wax addoonsada iyo culimada diinta oo fududeeya addoonsiga iyo sharci yaqaanada oo xirtay dhegahooda oo inkira in ay ka jirto dalka addoonsi.
Habi ayaa ku nool iyada iyo wiilkeeda oo 11 jir ah teendho oo ay u dhashay milkiilaheeda oo kufsan jiray. Sidaa darteeda waxay tiri “teendhadeyda waa igu filan tahay, waa teendhada karaamada, waxaa igu filan in aan ahay haweenay xur ah, cuntadeyda waa xuriyadeyda iyo sharafteyda, waxaa iga caawiyo quutkeyga maalinlaha asxaabteyda iyo dadka aan is naqaan oo lagu daray dhaqdhaqaaqayaasha”.
Bintu Rabah ayaa ka hadashay caruurnimadeeda waxayna tiri “Markii milkiilaha iga qaatay hooyaday waxaan jiray afar sano, waxaa ila dhashay labo wiil iyo gabar iga yareyd, maalintaasi ayaa aheyd maalintii iigu dambeysay oo aan arko wejiyadooda ilaa aan ka xuroobo”.
Habi ayaa mooday in ay u noqon doonto milkiilaheeda cusub sida gabdhihiisa, u labisato una cunteyso oo sameyso waxay doonto, ma ogeyn inay ka noqoneyso hooyo guriga milkiilaheeda inta ay nolol ku jirto, shaqo aan mushaar laheyn, mararka qaar cunto la’aan iyo naxariis daro.
Laakiin markii danbe waxay ogaatay in ay tahay ” addoon” halkaasi waxaa ku waajibay adeecida amarada xubnaha qoyska milkiilaha diidmo la’aan.
Waxay tiri: ” sidii aadane la ilama dhaqmin, waxaan cunni jiray haraaga cuntada, hadaanan waxba soo harin waxaad seexaneysaa cunto la’aan, waxaan seexan jiray xerada geela ama jikada ama meel kasta oo kale, ma jirin meel ii go’an oo aan seexdo”.
Habi ayaa tiri, haweenka qoyska ayaa noo muujinin naxariis, “waxa ay noola macaamili jireen sida xoolaha la dhaqdo, mana awoodin inaan daqiiqad ku maqnaado salaada, waa in aan qaadanaa eden wax kasta oo aan sameyneyno”.
Waxay intaasi ku dartay: “Milkiilaha nooma ogolaan jirin inaan xataa salaada tukado, wuxuu had iyo jeer ku celcelin jiray in aanan istaahilin inaan tukado, waxaa meesha u joogay oo keliya waxay aheyd shaqo”.
Haweenta mulkiilaha, ayaa marnaba diidin in uu ninkeeda kufsi u geysto Habi, balse waxa ay weliba ku qanacsaneyd in dhalida badan ay ku badato xoolaha.
Habi ayaa u dhashay milkiilaheeda laba caruur ah mid waa ka dhintay markii uu jiray 5 sano laakin wiilkeeda kale oo jira 11 sano ayaa la nool, iyada oo ay ka heshay milkiilaheeda oo markii hore u diiday inuu siiyo.
Sidaa darteed: “Aad ayaan ugu hanweynahay wiilkayga, oo waxaan u samaynayaa wax walba oo aan awoodo si uu u gaaro darajooyin sare.